७० करोड घूस मागेर भ्रष्टाचारी अनुहार उदाङ्गो पारेकाले बास्कोटाको घरमा हामीले बम हान्यौं: – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/७० करोड घूस मागेर भ्रष्टाचारी अनुहार उदाङ्गो पारेकाले बास्कोटाको घरमा हामीले बम हान्यौं:
७० करोड घूस मागेर भ्रष्टाचारी अनुहार उदाङ्गो पारेकाले बास्कोटाको घरमा हामीले बम हान्यौं:
बुधबार काठमाडौं, पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको निर्माणाधीन घरमा आफूले ब’म वि’स्फोट गराएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले बताएको छ। बुधबार बिहान बजेतिर भक्तपुरको मनहरा फाँटस्थित पूर्वसञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको निर्माणाधीन घरमा भएको ब’म वि’स्फोटको विप्लव स’मूहले जिम्मा लिएको हो। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्डमा ७० करोड घूसमा मोलमोलाई गरेकोलगायत विभिन्न १० आरोप लगाउँदै विप्लव नेकपाले बास्कोटाको घरमा वि’स्फोट गराएको जनाएको छ।
यी हुन् विप्लव समूहले बास्काेटावि’रुद्ध लगाएका १० आरोप-१‍. से’क्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदप्रकरणमा ७० करोड घूस मागेर भ्रष्टाचारी अनुहार उ’दाङ्गो पारेकाले ।२. २४ अर्बको से’टलाइट खरिद प्रकरणमा करोडौँ रकम भ्रष्टाचार गरेकाले ।३. १९ अर्बको फोर जी सेवा विस्तारका दौरान करोडौँ रकमको दुरुपयोग गरेकाले ।४. १० अर्बको अप्टिकल फाइबर विस्तारमा करोडौँ कुम्ल्याएर देशलाई कङ्गाल बनाउने भुमिका खेलेकाले ।५. मोबाइल डिभाइस र स्कुलमा इन्टरनेट सेवा–सुविधाका नाममा करोडौँ हिनामिना गरेकाले ।
६. सरकारको प्रवक्ता पदको दुरुपयोग गरी देशभरका ठूला परियोजनाबाट अर्बौं घो’टाला गरेकाले ।७. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्र’तिबन्ध लगाउने, फा’सिवादी द’मनको यो’जनाकार र ह’त्याको म’तियार बनेकाले ।८. राष्ट्र, जनता र क्रा’न्तिका वि’रुद्ध गो’यबल्स शै’लीमा नि’कृष्ट, उ’द्दण्ड, अ’राजनीतिक र गु’ण्डागर्दी भूमिकामा उत्रिएकाले ।९. आफ्नो औकात भुलेर क्रान्तिप्रेमी जनतामाथि फासिवादी दमन लाद्ने, चरम असहिष्णु, दलाल पुँजीवादी सत्ताको असली ठेकेदार र मुलुकमा साँढेखालको दादागिरी मच्चाएकाले ।१०. देशलाई अहिलेको जर्जर र सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुर्याउने नामुद दलाल भ्रष्टमध्ये एक भएकाले ।